Maraykanka Iyo Iiraan Oo Yeelanaya Kulan Fool Ka Fool Ah – Heemaal News Network
Maraykanka Iyo Iiraan Oo Yeelanaya Kulan Fool Ka Fool Ah
In kasta oo aad loo soo dhaweeyay wada hadalka dib u soo nooleynta heshiiskii nukliyeerka haddana waxaa jira shaki laga muujinaayo mira-dhalka wadahadalka.
Ergeyga Gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan wada xaajoodka Nukliyeerka, Robert Malley, ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka, wuxuu ku yiri: “kulanka Vienna ee la qorsheeyay inuu qabsoomo todobaadka soo socda waa talaabadii ugu horeysa ee loo qaaday soo nooleynta heshiiska Nukliyeerka Iiraan, laakiin wada hadalada way adkaan doonaan.”
Agaasimaha Hay’ada Tamarta Atomiga ee Iiraan, Cali Akbar Saalixi, ayaa dhankiisa ku sheegay hadal uu ka jeediyay habeenimadii Jimcaha Aaladda “Clubhouse” in wadahadalada farsamo ee la qorsheeyay in talaadada soo socota ay furmaan ayaa ka digay halista laga filan karo dhinacyada ka qeyb galaaya shirka.
Waxuu intaas ku daray in wada hadalkii khadka tooska ah ku dhexmaray wakiilada Jarmalka, Faransiiska iyo Ingiriiska, oo lagu daray Shiinaha, Ruushka iyo Iiraan, uu ahaa mid jabiyay ismari waagii hore ee hortaagnaa wada hadalka Nukliyeerka.
Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan ayaa dhawr jeer lagu eedeeyay ku xadgudubka heshiiskii horay looga gaaray Nukliyeerka iyo falal la xiriira ku xadgudubka xuquuqda aadanaha, waxaana la saadaalinayaa in wadahadaladan ay hormuudka u yahiin Iiraan iyo Mareykanka aysan noqon doonin mid ka fudud Labada dhinac.
Kaaliyaha Agaasimaha Sirdoonka Milatariga Ciraaq Oo Dil Ka Badbaaday
Ciidamada Ilaalada Turkiga Oo Badbaadiyey Tahriibayaal
Faadumo Siciid oo ka Dayrisay Siyaasada Arimaha Dibada Somaliland Intii Xisbiga Kulmiye Talada Hayay
Heemaall October 20, 2021
Qudbada M/Biixi U Jeediyay Jaaliyada Somaliland Ee Maraykanka
Heemaall March 20, 2022 March 20, 2022
Wafdigii Madaxweyne Farmaajo Oo si Wayn Loogu soo Dhoweeyey Doha.(Sawiro)
Heemaall November 29, 2021 November 29, 2021